Kunezinhlobo eziningana of malocclusion, kodwa lalibhekisela them - occlusion distal. Abantu nalesi sifo ongenhla kakhulu kuthé phezu phansi, ngaphezu kwalokho, kuba esithuthuke kabanzana. Ngokubukeka, kubonakala sengathi isiguli ayinakho kwesilevu - kuyinto encane kakhulu uma kuqhathaniswa ubukhulu ongenhla.
Ngokuvamile, occlusion distal abaguliswa zofuzo beyizidlova abantu isifo. Nokho, ngokuvamile, ngemva kokulunywa enjalo kwenzeka uma ingane kusukela ebuntwaneni ukumunca iminwe yakhe, futhi uma unezinkinga ngemuva nomphimbo, ngoba lezi zimo, ongenhla okhula ngokushesha kunokuba phansi, ngenxa yalokho okuvela futhi occlusion distal.
Ezimweni omnene lesi sifo futhi iziguli ungacabangi ukuthi aya ebusweni zishintshile ngenxa occlusion futhi akubhekiseli lokhu njengoba inkinga. Nokho, kuyinto efiselekayo ulungise yizinyoka, njengoba nje kuphela obuhlanekezela ebusweni, kodwa futhi wenza okusheshayo ukubola kwamazinyo. Uma isiguli namanje wakhetha ukungahlukanisi aphathe occlusion distal, kungaba ulinde lezi zinkinga ezilandelayo:
1. namazinyo ezingemuva kusheshe ubhujiswe ngenxa umthwalo anda phezu kwabo;
2. Ngokuhamba kwesikhathi singagwinyi iyoba nzima nakakhulu;
3. Ukubukeka isifo sezinsini futhi ngenxa yalokho, ukuphuma amazinyo;
4. Ubuhlungu ngesikhathi ukuhlafuna, okuyinto etholakala ngokukhula ngeminyaka iyoba ngokuya ngiqina.
occlusion Distal: Ukwelashwa
Ukwelapha lesi sifo kusaqalwa akunzima ikakhulukazi - nje ufake besokunxele noma olunye uhlelo efanayo sokulungisa bite. Uma lesi sifo isungule kakhulu, futhi elungile bite besokunxele engasakwazi ke isiguli kuzodingeka ukuze uvumelane ukuhlinzwa. Nokho, yokulungiswa occlusion distal zidinga ukusetshenziswa kwamadivaysi ngaphezulu noma ezengeziwe.
Uhlola isiguli wamazinyo, esekelwe imbangela okuvela kuyo i occlusion ezinjalo, esabela ukwelashwa okufanele. Uma ongenhla sesiqhubeke kakhulu, it has ukunciphisa, isibonelo, ngokususa amanye molars. Uma, kunalokho, umhlathi ongezansi kuyinto ampofu, ukuphathwa esiwabelwe ukuthuthukiswa yayo.
Ukuze kulungiswe bite distal kuhamba phambili e izingane zabo, kodwa ngemva wonke umntwana amazinyo esikhundleni bomdabu. Ngenxa yale njongo ipuleti, abaqeqeshi, emathileyi kwamazinyo.
Lapho isikhulile efakwe besokunxele futhi agcinwe myostimulation mandible. Le nqubo kwenza kube lula ukuthuthukisa imisipha yobuso ukusiza aqhubekele phambili umhlathi ongezansi. Kufanele ukuthuthukisa ukuhlafuna imisipha kanye nemisipha, ngawo is eliqhutshwa umhlathi ongezansi. Ngezinye izikhathi arc ebusweni. Lapho overdevelopment we maxilla ngempela ukususa molars eziningana. Ngokuphelele Ukwelapha ithatha iminyaka emithathu, kanye nesidingo ukuba avume ukwelashwa yesondlo iminyaka emihlanu. Phakathi nale nkathi, bite yenu kuyovumelana kancane kancane ukulungiswa.
Ukuze uvimbele ukuthuthukiswa bite distal, kudingeka ulandele amathiphu ambalwa alula, kuyilapho ingane isencane. Okokuqala, kufanele wean kuye ncela isithupha sakhe lapho ikwenze. Ngokuvamile kuba lo mkhuba kubangela malocclusion, futhi akusho ngaso sonke isikhathi distal. Kubalulekile futhi ukulungisa ukudla kwengane - yokudla kufanele kube ukudla samanje okusezingeni eliphezulu-vitamin D ne-calcium. Kumele unikeze ingane ukudla sakho esiqinile sokuthuthukisa izicubu masticatory. Kuyasiza ukuba ilanga eziningi. Ngaphezu kwalokho, kudingeka ubone udokotela wakho njalo futhi ngesikhathi ukwelapha izifo we nasopharynx. Kubaluleke ngokufanayo ukuvimbela ugobile ukuzala, okungaholela ukuthuthukiswa malocclusion. Uma isimo sakho sihambelana nemibandela leyo mithetho, ingane uyomenzela kokulunywa lesifanele.